Koorsooyinka & Alaabada
Ixtiraam - guushu waa sahal!
Hadal yar, inbadan sheeg
Ugu dambeyntii dhiirran!
Iibi sida sixirka
Dalbo kulan istiraatiijiyad ah
Guushaadu horay ayey kuugu jirtaa ...
Ixtiraamku waa xoog sixir ah oo sameeya mucjisooyin, kiniin mucjiso ah oo lagu guuleysto, runtiina waa wax aan la fahmi karin in kulligeen aannaan casharo iskuul ku qaadan maadadan muhiimka ah laga soo bilaabo fasalka koowaad.
Taasi waa sababta aan buugan ugu qoray qof kasta oo ila mid ahaa, oo in badan isku dayay haddana aan u horumarin siday rabaan oo ay u qalmaan.
"Ixtiraamka - guushu waa wax aad u fudud" waxaan ku tusayaa qaaciddada sixirka, waxaan ku tusayaa sida had iyo jeer ay u fududahay uguna fududahay inaad gaadho meesha ugu sarreysa, guushaada dhan walba ah iyo ka-faa'iideysiga qof walba.
Codso buug bilaash ah hadda
Sidee ixtiraamku u shaqeeyaa, sida ugu fudud ee aan u keeni karno ixtiraam badan cilaaqaadka oo dhan iyo sida wanaagsan ee qaddarinta leh ee degdegga ahi u shaqeyso - taasi waa waxa aan ku sharraxay buugga.
Haddii aad aniga ila mid tahay, oo aan sabir lahayn oo ay ka go'an tahay, oo aad raadineyso guul, markaa tababbarku wuxuu noqon karaa wax adiga uun kuu ah ... La-taliye dhinacayaga ah, ma aha oo kaliya mid dhakhso badan oo fudud, wuxuu kaloo u baahan yahay si aad u yar isku dayga & qalad
Raadi naftaada hadal istiraatiijiyad daqiiqad ah oo bilaash ah 45 ila ila hadal. Waqtigu waa lacag, ayay leeyihiin. Laakiin intaas in kabadan, waxaa jira kharashyo fursado, kharashyada dayaca, daahida, daahida, khaladka luminta. Kharashyada aanad arki karin oo fahmi kara aakhirkoodana aad noogu qiimo badan.
Raadi ballanta xigta ee bilaashka ah isla markiiba aniga ila raadso - waan rajeynayaa!
Bilaash 45-daqiiqo Dalbo kulan istiraatiijiyad ah
Ixtiraam - guushu waa sahal
Ma tahay ganacsade, qof iskood u shaqeysta ama farsamo yaqaan?
Miyaad shaqaysaa wax badan oo riyo ah inaad hawo badan yeelato?
Ma jeceshahay inaad ka hesho qiimo ka wanaagsan iyo khidmadaha sare ee adeegyadaada ugu sarreeya suuqa?
Mise waxaad dooneysaa oo kaliya in waxyaabaha ay sahlanaadaan, ka wanaagsanaadaan kana raaxaystaan?
Markaa waa inaad u oggolaataa mid ka mid ah xoogagga ugu xoogga badan ee jira inay shaqo kuu socoto - halkii aad ka yeelan lahayd xoog aan xad lahayn howlahaaga.
Waxaan ka hadlayaa ixtiraam. Xaqiiqda, xushmadda dhabta ah ee naftaada iyo hareerahaaga. Waxaad layaabi doontaa waxa ay wax waliba macquul yihiin. Way fududahay, dhaqso iyo ka wanaagsan ...
In yar ayaa aqoonsatay.
Ixtiraamku waa furaha - adiguna waa inaad hadda isticmaashaa. Macaashka macaamiishaada, reerkaaga iyo naftaada.
Aad u faraxsan!
Ixtiraamku waa awoodda ugu liidata ee bulshadeenna. Wax yar ayaan ka baranay iskuulka, iskaba daa inaan fahano sida loogu isticmaalo ixtiraamka nolol maalmeedka faa iidada qof walba oo ku lug leh.
Kaliya waxaan ogaaday tan naftayda kadib sanado badan oo aan xirfada kujiray, iyo xaaskeygu waxay in kabadan hal jeer umuliso iyo macalin ii ahayd isla waqtigaas.
Arinta yaabka lihi waxay tahay: aqoonta kaligeed inay kafiican tahay.
Xitaa ka dib markaan aaminay inaan fahmay fikradda, wali waxay qaadatay sanado badan oo tababar iyo codsi ah si aan u ogaado faahfaahinta badan ee ku saabsan qadarinta iyo qadarinta, iyo inaan fahmo nidaamka ka dambeeya.
Qof kastaa dabcan wuu sameyn karaa, wuu ogaan karaa naftiisa - wuxuuna ku maalgelin karaa kala bar nolol xirfad leh ...
Laakiin haddii aad tahay mid aan dulqaad lahayn, oo aad xiiseyneyso, oo aad gaajaysan tahay, sidayda oo kale, waan ku farxi doonaa inaan ku soo gaabsho ereyga. Waa wax aad u fudud ...
sida carruurta yaryari u sameeyaan: marka hore samee - ka dib fahma.
Iyo waxa aad sameyn karto, talaabo talaabo, waan ku tusi doonaa waana ku faraxsanaan doonaa inaan ku raaco. Hadaad jeceshahay Waxyaabaha yaabka leh ee la damaanad qaaday, guulaha lama filaanka ah ee aan laga reebin.
Saxiix wadahadal istiraatiijiyad bilaash ah aniga ila soco oo aan aragno waxa kula socda. Waxaan rajeynayaa inaan ku barto shaqsiyan.
JT Foxx Chicago - Ixtiraamku waa aasaaska dhammaan
Maya 1 tababaraha ganacsiga, ganacsade taxane ah, hanti ma guurto iyo maalgashadeyaal gaar loo leeyahay, JTFoxx oo ku saabsan awooda ixtiraamka iyo khibradiisa Juergen xaflad ganacsi oo 5 maalmood ah oo ka dhacday London.
Patrick, ganacsade da 'yar, 8: 1 tababarenimo 1 toddobaad.
Waxaan ogaaday xadka aniga ii gaar ah, dib u habeeyay diiradeyda, waxaan kordhiyay isku kalsoonideyda, waxaan helay aragtiyo cusub waxaanan hormariyay ganacsiga. Way u qalantay, ayaa lagula taliyay.
Irem, ardayga sharciga iyo suuqgeynta mustaqbalka iyo ganacsadaha warbaahinta bulshada ee ku saabsan tababbarka zoom ee Juergen, bartamaha Corona.
Codadka Caalamiga ah ee Ixtiraamka
Wareysiyada ku saabsan “Ixtiraamka” adduunka oo idil sannadaha 2019 iyo 2020.
Fred Fishback, Maamulaha Guud ee Warshadaha Javelin - Ixtiraam
Ixtiraam - wax aad muhiim u ah oo maanta loo baahan yahay.
Fikradda ixtiraamku waa mid aasaasi ah, waa waxa ay tahay inaad marka hore xakameyso.
Waxaan ubaahanahay fududaanida fikradan.
Waxaan u maleynayaa inaad ku jirto wax aad muhiim u ah waana ku faraxsanahay waxaad sameyneyso Juergen.
Ixtiraamku waa aasaaska cilaaqaadkeena,
ixtiraamku waa aasaaska is-qiimaynta,
ixtiraamku waa aasaaska koritaanka dheeraadka ah.
Runtii waan ku faraxsanahay waxaad sameyneyso, waa fikrad aad u awood badan.
Shirka London ee Sharciga Sharafta Leh
Wareysiyada la soo koobay ee ku saabsan “Ixtiraamka” Shirka Ganacsiga ee 2020 ee Bulshada Sharci ee London.
Ixtiraam Wareysiga Hilton London Metropole
Soo koobid "Ixtiraam" Wareysiga 2020 ee Hilton London Metropole Lobby
Wax badan ayaan ku leeyahay, wax walba ayuu galiyaa mashruucyadiisa, wuu furan yahay adduunka kamana cabsanayo isbeddel, kama cabsanayo caqabadaha ... Lixdii bilood ee aan aqaanay, durba wax badan buu i caawiyay. fekerkeyga shaqsiyeed, waxaad kaliya u baxeysaa halkaa oo lagu daro.
Er Juergen Wilke
Xubnaha aagga leh DigiMember